फिलिपिन्स नयाँ परम चिकित्सा पर्यटन गन्तव्य हो
स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » स्वास्थ्य » फिलिपिन्स नयाँ परम चिकित्सा पर्यटन गन्तव्य हो
चप्पल र शर्ट्स हवाई मा एक मानक ड्रेस कोड हो। मा निवासीको रूपमा Aloha 30 वर्ष भन्दा बढीको लागि राज्य, यो एक जर्मन-अमेरिकी को रूप मा मेरो लागि पनि सामान्य भएको छ।
तथापि, चप्पल लगाउनाले मासु खाने ब्याक्टेरिया संक्रमण सहित अप्रत्याशित जीवन-धम्की दिने खतराहरू आउन सक्छ।
मेरो कथा फिलिपिन्समा खुशीको नतिजाको साथ हवाईमा सुरु हुन्छ।
मैले उत्कृष्ट टोलीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद र मलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा राम्रो अस्पताल, मनिला, फिलिपिन्स मा माकाटी मेडिकल सेन्टर, शाब्दिक रूपमा मेरो जीवन बचाउनको लागि।
मकाटी मेडिकल सेन्टरमा मेरा व्यक्तिगत नायकहरूले नेतृत्वमा काम गर्छन्:
डा. काओली, जेनिस क्याम्पोस, संक्रामक रोग
डा पल लापिटन, हृदय रोग विशेषज्ञ
डा. भिक्टर गिस्बर्ट, सर्जन
मलाई इमानदारीपूर्वक लाग्छ कि यदि मैले मेरो गृह राज्य हवाईमा मेरा डाक्टरहरूमा भर परेको भए म खराब अवस्थामा हुने थिएँ। मनिलामा भएको WTTC शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनाले मेरो स्वास्थ्यमा अप्रत्याशित रूपमा योगदान पुर्‍यायो र म मेरो भविष्यको जीवनको गुणस्तरमा ठूलो आशा राख्छु- र यही कारणले गर्दा।
यो फिलिपिन्समा कार्यमा बनेको चिकित्सा पर्यटन थियो
यो सबै शुक्रबार, अप्रिल १५, २०२२ मा सुरु भयो। होनोलुलु छोड्नु अघि मैले मेरो दोस्रो COVID बूस्टर शट पाएँ। मनिलामा WTTC शिखर सम्मेलन। शनिबार, अप्रिल 16 मा, म एक साधारण पेडीक्योर गर्न गएँ अला मोआना शपिंग सेन्टर होनोलुलुको मेरो घरको अपार्टमेन्टबाट। पेडीक्योर एक सानो सानो कट बाहेक राम्रो भयो जुन राक्षसमा बढ्दै गयो।
आइतवार, अप्रिल 17 मा, म युनाइटेड एयरलाइन्समा गुआमको लागि उडान गरें, विमानहरू परिवर्तन गरें, र सोमबार राती (अप्रिल 18) मनिला आइपुगे। मैले मेरो होटलमा स्थानान्तरण गरें ग्रान्ड हयात.
Afteragood night’s sleep, I woke up in the morning with chills,afever, and an infected red leg. Thinking this will heal itself, I made it toaWatson pharmacy to get some aspirin. That did bring my temperature down. I gotaCOVID test and it came back negative. On Wednesday, I transferred to the venue hotel of the WTTC Summit, the मैरियट मनिला। मैले WTTC शिखर सम्मेलन स्वागत रात्रिभोजको लागि लुगा लगाएँ तर सबै पछि यसलाई छोड्ने निर्णय गरें। मेरो देब्रे खुट्टाको दुखाइले सतायो।
बिहान, म लिफ्टमा गेराल्ड ललेसमा दगुरेँ र उसलाई मेरो खुट्टाको बारेमा बताए। उनले होटलको मेडिकल अफिसमा जाँच गराउन आग्रह गरे । मेडिकल अफिस फिलिपिन्स कोस्ट गार्ड द्वारा संचालित थियो।
म अफिस गएँ, र अस्पतालमा मेरो खुट्टा जाँच गराउने निर्णय गर्नु अघि मलाई मनाउन र यसबारे छलफल गर्न २ घण्टा लाग्यो। WTTC कार्यक्रमको लागि कलमा डाक्टरले कोस्ट गार्ड एम्बुलेन्स बोलाए, र हामी मनिलाको मकाटी मेडिकल सेन्टरको आपतकालीन कोठामा गयौं।
त्यहाँबाट, सबै धेरै छिटो गयो। मलाई पीसीआर कोभिड परीक्षणको नतिजा पर्खन आइसोलेशन कोठामा राखिएको थियो। प्रत्येक २ घण्टामा मेरो अर्को परीक्षण गरियो। यो व्यापक रगतको काम, टिटानस शटहरू, र IV मार्फत एन्टिबायोटिकको उच्च डोजमा राखिएको सँगै आयो।
सौभाग्यवश मेरो पीसीआर परीक्षण दोस्रो दिन नेगेटिभ आयो, र मलाई अस्पतालमा5कोठा प्रकारको छनोट दिइयो। मैले ठूलो निजी कोठा छानें। यो ठूलो, राम्रोसँग सुसज्जित, र अस्पतालको कोठा भन्दा होटल कोठा जस्तै थियो।
यस बीचमा, डाक्टरहरूको3स्वतन्त्र टोलीले सम्भव सबै परीक्षणहरू गरे। अल्ट्रासाउन्डदेखि छातीको एक्स-रे, रगत र दिसाको काम - मैले अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा व्यापक चेक-अप।
यसलाई अझ रोमाञ्चक बनाउनको लागि, एउटै खुट्टामा अल्ट्रासाउन्ड प्रक्रियाको क्रममा दुईवटा रगत जमेको पत्ता लगाइयो, जसले मलाई विमानमा घर पुग्ने बारे सोच्न पनि रोक्यो। मलाई रगत पातलो लगाइयो।
यी सबै परीक्षणहरूको नतिजाले मलाई मेरो स्वास्थ्यको पूर्ण चित्र दियो। कार्डियोलोजिस्टले मैले वर्षौंदेखि लिएको रक्तचाप ककटेल परिवर्तन गरे, र मेरो रक्तचाप अहिले कहिल्यै राम्रो भएको छैन।
नर्सहरू मेरा असल साथी बनिन्। फिलिपिन्सका स्वास्थ्यकर्मीहरू जोशका साथ सेवा गर्न विश्वभर परिचित छन्। मेरो आईफोनको लागि चार्जर केबल खोज्ने र ठूलो मुस्कानका साथ मसामु ल्याएको नर्सको नाम सम्झिएँ।
मापाती मेडिकल सेन्टरले आफ्नो लक्ष्यका लागि राखेको दयालु गुणस्तरीय सेवा हो- र क्लिनिकले यो मोर्चामा डेलिभर गरिरहेको छ।
"हामीले गर्ने सबै कुरामा हाम्रो हृदय लगाउँछौं - बिरामीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा, सहकर्मीहरूको भलाइ र MMC को ठूलो भलाइको लागि के सही छ त्यसै गरेर हाम्रो मूल्यमान्यताहरू बाँच्दछौं," अस्पतालको मिशन स्टेटमेन्टमा छ। वेबसाइट।
“मकाटी मेडिकल सेन्टरले देशका व्यवसायी र स्वास्थ्य सेवाका नेताहरूबाट विनम्रतापूर्वक गवाद बायनिङ कलुसुगन पुरस्कारहरू स्वीकार गर्यो। यस्ता मान्यताहरूले हामीलाई हाम्रा बहादुर स्वास्थ्य योद्धाहरूको कथाहरू मनाउन अनुमति दिन्छ जसले अरूलाई बचाउन आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्छन्। ”
मेरो प्रमुख डाक्टर, संक्रामक रोग मा एक विशेषज्ञ, हालै यो पुरस्कार जिते।
मकाटी मेडिकल सेन्टर 1969 मा प्रख्यात फिलिपिनो डाक्टर र व्यापारीहरु द्वारा स्थापित भएको थियो।
कथा 1960 को प्रारम्भमा सुरु भयो जब प्रसूति विशेषज्ञ-स्त्री रोग विशेषज्ञ Constantino P. Manahan, MD, सर्जन जोस Y. Fores, MD, र कार्डियोलोजिस्ट मारियानो M. Alimurung, MD, मिलेर मकाटीमा विश्व-स्तरीय चिकित्सा सुविधा स्थापना गर्ने निर्णय गरे।
त्यतिबेला, मकाटी भर्खरै एक हलचल आवासीय र व्यावसायिक केन्द्रको रूपमा उठ्न थालेको थियो। आयला समूहले अझै पनि मनिला उपनगरलाई देशको प्रमुख व्यापार जिल्लामा रूपान्तरण गर्ने योजनाको प्रारम्भिक चरणहरू कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। योजनाले समुदायको सेवा गर्नको लागि आधुनिक अस्पताल चाहिन्छ।
निर्माणको लागि रकम जुटाउन, संस्थापकहरूले आफ्नो सपना साझा गर्ने डाक्टरहरू र अन्य पेशेवरहरूको खोजी गरे। तिनीहरूले एक दूत पठाए, एटी। आर्टेमियो डेल्फिनो, थप लगानीकर्ताहरूको खोजी गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका।
मे 31, 1969 मा, माकाटी मेडिकल सेन्टरले औपचारिक रूपमा जनताको लागि आफ्नो ढोका खोल्यो। यसको संस्थापकहरूका लागि, यसले फिलिपिनोहरूका लागि विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न वर्षौंको कडा परिश्रम र बलिदानको सपनाको पूर्तिको रूपमा चिन्ह लगायो।
मे 31, 2019 मा, माकाटी मेडिकल सेन्टरले आफ्नो सुनौलो वार्षिकोत्सव मनायो। मकाटी मेड समुदायले अस्पतालको विरासतमा संस्थापक पिताहरूको अमूल्य योगदानको सम्झना गर्यो। संस्थाको कथा र विरासतलाई फिलिपिनो र विश्वव्यापी समुदायको सेवाको ५० वर्षको अवधिमा वर्णन गर्नको लागि “Ginintuan” (गोल्डेन) शीर्षकको कफी टेबल बुक जारी गरिएको थियो।
मकाटी मेडमा, मालासकिट यसको गुणस्तर नीतिमा निहित छ: "हामीले गर्ने हरेक कुरामा हाम्रो हृदय लगाउँछौं - बिरामीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा, सहकर्मीहरूको भलाइ, र अझ राम्रोको लागि के सही छ त्यसै गरेर हाम्रो मूल्यमान्यताहरू बाँच्दछौं। MMC को।"
सक्षम, उपयुक्त, सुरक्षित, र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्दै जसले सकारात्मक बिरामी परिणामहरू र बिरामी र सहकर्मीहरू बीचको सन्तुष्टिको उच्चतम स्तरमा परिणाम दिन्छ।
काममा ध्वनि, नैतिक र नैतिक सिद्धान्तहरू प्रदर्शन गर्दै; अस्पतालको नाम र नैतिक मापदण्डमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने ।
अस्पतालको आचारसंहिता र आफ्नो पेशाको नैतिक मापदण्डलाई समर्थन गर्दै; आफ्नो कर्तव्यको प्रदर्शनमा लगातार दक्षता प्रदर्शन गर्दै।
शब्द र कार्यहरू मार्फत साँचो चासो र सहानुभूति देखाउँदै जसले बिरामी र सहकर्मीहरूको उन्नतिको लागि नेतृत्व गर्दछ।
एक साझा लक्ष्य तर्फ टोलीसँग सामंजस्यपूर्ण र सम्मानपूर्वक सहकार्य गर्दै।
म ५ रात पछि रिहा भएँ र म्यारियट होटल मनिलामा फर्किएँ। मेरो कोठा अछुतो थियो, र यो घर फर्के जस्तो लाग्यो।
मलाई फिलिपिन्सको पर्यटन विभागबाट शार्लिन बाटिन र विभागका सहायक सचिव भेर्ना कोभर बुएनसुसेसोले उठाएका थिए।
Maribel Rodriguez, WTTC को वरिष्ठ VP हरेक दिन मलाई जाँच गर्थे।
यो अनुभवले पर्यटन भनेको मित्रता, मानवीय सम्बन्ध र शान्तिको बारेमा पुष्टि गरेको छ।
पर्यटन भनेको एउटा व्यवसाय मात्र होइन, यो आत्मासँगको व्यवसाय हो।
म अहिले निको हुँदैछु हयात रिजेन्सी मनिला, सपनाको शहर, निर्देशन र औषधिहरूको लामो पानाको साथ।
फिलिपिन्स पर्यटन बोर्डका मेरा नयाँ साथीहरूले मलाई हिजो राति मनिला कफी फेस्टिभलको उद्घाटनमा लिएर गए - धेरै रमाइलो, र मलाई चिन्ने जो कोहीले मलाई कफी मनपर्छ भन्ने कुरा बुझ्दछन्।
Juergen Steinmetz र Sharlene Batin, फिलिपिन्स पर्यटन विभाग
फिलिपिन्समा कमको लागि थप प्रथम श्रेणी स्वस्थ रमाइलो गर्नुहोस्!
"यो खुलासा हुनु र बाहिर आउन र भाइरल हुने तयारीमा रहेको रहस्य हो", जुर्गेन स्टेनमेट्जले भने। “फिलिपिन्स मेडिकल टुरिजमको लागि नम्बर एक गन्तव्य बन्नेछ। सबै सामग्रीहरू यहाँ छन्। उत्कृष्ट विश्व-स्तरीय डाक्टरहरू र सुविधाहरू, नर्सहरू जसले विश्वभर उच्च-गुणस्तरको हेरचाहको लागि मानक राख्छन्, र एक सुन्दर देश, अद्भुत समुद्र तटहरू, राम्रो खाना, र रोमाञ्चक शहरहरू।
बिल कति आयो ?
यसका थप मजाका फिलीपाइनहरू
थप मा: चिकित्सा पर्यटन
UWA ले मर्चिसन फल्स पार्क समुदायलाई US$825,000 हस्तान्तरण गर्दछ
रकी प्वाइन्ट बीच सेन्ट थोमस टुरिजम किक-स्टार्ट गर्न...
अटिजमको लागि नयाँ लार परीक्षण
मस्तिष्कको गहिरो उत्तेजनालाई धकेल्ने न्यूरोलोजिकल विकारहरू...
Marion Primeau भन्छन्:
अप्रिल २१, २०२० ००:१० मा
मैले साँच्चै मेडिकल लेखको आनन्द उठाएँ कथा साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद र म खुसी छु कि तपाईं फेरि ठीक हुनुहुन्छ।
र मलाई लेखहरू मनपर्छ त्यसैले तपाईंको स्वास्थ्यको लागि टोस्ट छ।